Sheeko Jaceyl ah oo xiiso badan
Sheekooyin jaceyl oo xiiso badan kala soco boga arimaha jaceylka ee erayo jaceyl, sheekadani ayaa ah sheeko jaceyl ah oo xiiso badan, weliba sheeko cajiib ah.
Waxaan horay kaga soo hadalnay sheekoooyin jaceyl ah oo xiiso badan weliba kuwooda murtgida leh. Sheekooyinkani waa sheekooyin taxane ah oo aad had iyo jeer kala socan doontaan boga mucaashaqiinta ee Erayojaceyl.com.
Erayo jaceyl waxaad ka heli doontaan wax walbaa oo nafta farxadgelin karo sida arimaha jaceylka, geeraaro iyo sheekooyin lala dhaco. Si fudud ku qor Google ka Erayojaceyl.com kadib waxaad si toos ah uga akhrisan kartaa fariimahii iyo qormooyinkiiu ugu dambeeyay.
Sheeko Jaceyl ah oo xiiso badan qeybaheeda kale duwan
Sheeko Jaceyl ah oo gaaban
Sheeko Jaceyl oo qosol badan
Sheeko Jaceyl oo dhameystiran
GABADHII SAAXIIBKEEDA TALADA SIISAY.
Nin Xaasle ahaa ayaa la Sheekeysteen gabar yar, Haasawihii wuxuu gaarsiiyey inay is jeclaadaan. Markii ay arkeen iney kala maarmi karin, ayaa waxey ku fikireen iney is guursadaan.
Ninku wuxuu qabaa xaas u leh 5 carruur ah. Waana gabar ka amar sareysa, oo aad u Ad-adag. Taa waxaa ka sii daran waa maseereey oo ay Adag tahay iney aqbasho inuu Ninkeeda Naag kale la guursado. Wax weyn lama ahan iney caruurta u daadiso. Biyo uma Kabaneyso iney isaga daano gaarsiiyo.
Haddii ay damacdana, gabadhaasi kaw ayey kaga siin kartaa. Waa manaxdo. Ninkaan gabadhaan inuu Guursadana wuu jecel yahay, misana dhibka xaaskiisa kaga imaanaaya ayaa caqabad weyn u ah.
Gabadhaan uu jecel yahay, waa hore ayuu la socodsiiyey culeyska ka haya xaaskiisa kale iyo dhibka ka imaan kara haddii ay is Guursadaan. Xittaa wuxuu u sheegaa inuu iyada uu u baqaayo oo ay xittaa dili karto. Haddii uu kala qariyo oo tana maalintii qabo, xaaskiisana Habeenkii qabo, wuxuu ka baqayaa in inta ay mar un ogaato, ay balo ka raaci doonto.
Gabadhu qudheedu wey aragtaa caqabadda heysata, kamana maaranto Ninkaan oo Laabteeda ayuu boos weyn ku yeeshay. Labadaba, feker iyo talo rogrog bey maalin walba isugu yimaadaan iyo sidii ay arrintooda ku wadan karaan iyado dhinac walbaa laga eegayo.
Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa gabadhii waxey keentay Talo Cajiib ah oo uu Ninkii la dhacay. Waxeyn ku tiri, “Xabiibi, waxaad raadisaa meelaha ay u badan yihiin wadaadada xaasaska badan leh. Xittaa waxaad raadisaa meelaha ah ay madaarista ku leeyihiin. Kolka aad hesho, waxaad sameysaa, xaaska halkaas u rar oo geey. Waxa aad ku dartaa iyada iyo Caruurtaba madaaristaas. Marka ay lex bil joogto oo ay fahanto, markaas aanu is guursanno.
In kasta oo ay Kici doonto, laakiin miin yarooyinka iyo min weynooyinka culimada ayaa dejin doono. Diintana wax ka fahansiin doono, xaalkuna waa iska degayaa, anaguna Jacaylkaan ayaan ka lib keeneynaa”. Ninkii arrintani waa la fiicnaatay, waaana la dhacay misana soo dhaweeyey, waana qaatay taladaas ayuu ku yiri iyada.
Ninkii wuxuu raadiyey meelaha ay wadaaddaadu u badan yihiin, kolkaas buu muddo ka dib wuxuu soo helay Madrasada Salafiyada. Waa Madraso ay wax ku bartaan caruurta iyo haweenka culimada Salafiyada iyo dadka taabacsan. Ka dib ninkii xaaskiisii buu inta u tagay, ka dhaadhiciyey iney halkaas degto, oo ay iyada iyo carruurtuba diinta ka bartaan. Wuu soo tusay, waana ka yeeshay. Kolkaas buu ninkii halkaas boos ka iibsaday, oo dejiyey reerkii.
Xaaskii iyo Caruurtiiba horay bey ka galeen Madrasadii. Xaaskii oo aan awalba ku fiicnayn Qur’aanka ayaa ka heshay barashada Diinta, aadna ugu Riyaaqday. Waxa kale oo ay heshay Dumar culimo oo ay saaxiibo ka dhigatay. Ninkii, wuxuu arkaa xaaskiisii oo xijaab weyn iyo Indho shareer xiratay iyo iyadii oo u toosineysa salaadda subax, kuna khasbeysa in uu Masajidka ku tukado.
Markii muddo la joogay, ayuu gabadhii guursaday, oo uu la aqal galay. Marrkii ay maqashay ayey is martay. Dumarku, kolka ay wax ku soo ziyaadaan saaxiibadood bey la aadaane, waxey arrintii u sheegtay dumarkii xerta ahaa ee ay baratay, kolkaas bay inta ku qosleen, la yaabeen, waxeyna ku yiraahdeen, “Ukhti, ma naagtii Labaad baad sidaas uga maseeraysaa, Anigu waxaan ahay xaaskii Labaad, tani waa xaaskii Seddexaad, taasnina waa xaaskii Afaraad”.
Markaas bay haddana dhanka diinta wax ka tuseen. Sidii ay wax u tusaaleynayeen, Xaaskii wey degtay. Markaas bey maalin inta Ninkii wacday, ku tiri, “Xaaji Hambalyo, xaaska cusub Allah inoo barakeeyo” Minyaradii inteey is barteen ayey si wanaagsan ula hadashay.